HABABKA UGU FIICAN IYO HABABKA LOOLA DAGAALLAMO BARAHA DACHA - XAKAMAYNTA CAYAYAANKA
Beeraley kasta oo doonaya inuu cawska ku ilaaliyo xaalad wanaagsan, iyo goosashada beerta waa ammaan iyo cod. Hase yeeshee, haddii ayadu si dhakhso ah kuugu soo degaan, markaa waxay samayn doonaan meelo badan oo hareereysan oo dhaqdhaqaaqa oo dhanna way wada baabi'i doonaan dhamaan foosaha shaqadaada. Tixgeli waxa aad samayn lahayd haddii bargu ku dhufanayo beertaada, iyo sida loola macaamilo.
Waxyaalaha gaarka ah ee nolosha barafka ee xagaaga xagaaga
Si aad u bilawdo dagaal ka dhanka ah jiirarka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato sifooyinka noloshooda. Baraha waxa loola jeedaa naasaha xoolaha xayawaanka ku habboon qaab nololeedka dhulka hoostiisa. Jidhkiisa ayaa lagu soo koobay, oo daboolay dharka madow. Joodarka Mole waxay leedahay hanti aan caadi aheyn - waxay u koreysaa si qoto dheer.
Tani kama horjoogsanayso xayawaanka in ay ka baxaan dhulka hoostiisa iyo xagga dambe. Forelimbs leh cirrid weyn oo muuqaal muuqaal ah, ka xoog badan oo ka mid ah qalabka kuwa. Xayawaanku wuxuu leeyahay dabo gaaban, madax yar oo leh sanka dheer oo qaab ah tijaabo-dhexdhexaadin. Inkastoo dhagaha iyo indhaha ay yihiin kuwo aad u yaryar, dareen cajiib leh oo ur ah iyo taabasho waxay ka caawisaa xayawaanku in ay naftooda bartaan.
Muraayadu waxay ku nooshahay guri ku yaal dhulka hoostiisa, oo badanaaba ku yaal meel wax lagu duubo oo ka kooban nidaam adag oo marinnada, iyo lakab ku yaal bartamaha. Meelaha digsiyada qulqulaya xawaaraha aan caadiga ahayn, dhulka dhulka dushiisa ayaa lagu tuuraa dusha sare. Gorgortanka waxaa lagu daboolay walxaha jilicsan, dhowr ah ayaa u horseeday hogaaminta.
Haweeneyda bilaha Abriil-Juun, mararka qaarkood bisha Agoosto, waxay dhashaa ilaa shan jibbaar halkaan. Boodhku wuxuu ku faafaa dirxiga cayayaanka, dhulluubyada, dhirta, lakabyada, rahamka, jiirarka, qorraxda, iwm. Xilliga maalinta, xayawaanku wuxuu cunaa xaddiga cuntada, qiyaastii u dhiganta miisaanka jirkiisa.
Moolka si fiican ayuu u ciyaaraa. Si uu naftiisa u siiyo biyo si uu u cabbo, wuxuu qodayaa godad qoto dheer oo qoto dheer. Xilliga jiilaalka, baruhu wuxuu ku sii qulqulayaa dhulka, laakiin ma dhici doono isbeddelka.
Maadaama ay cayayaanka aan ahayn jiirka, waxay dhaawici karaan dhirta sababtoo ah qashin qubka. Tuulooyinka Mole waxay ku yaalliin xagga hoose iyo qoto dheer. Tufaaxa cawska ayaa iska leh jumladaha quudinta, iyo tunnel qoto dheer ku xiran yihiin quudinta hal shabakad.
Waa muhiim! Moles-ka waxay hubinayaan dhamaan jihooyinkooda saacad kasta. Haddii tuneelku waxyeelo, xayawaanka ayaa si degdeg ah u soo celiya si uu dib ugu soo celiyo, sida caadiga ah wuxuu jebiyaa heer ka hooseeya heerka tunew this.
Xayawaanku waxay u dhaqaaqaan xawaare 5-6 km / h, waxay u dhaqmaan si aan dibadda u aadin. Xayawaanku aad buu u taxaddaraa, sidaa daraadeed way adagtahay in la qabsado.
Yaa caanaha ka cabsada? Xayawaankani sidoo kale waxay leeyihiin cadow. Kuwaas waxaa ka mid ah dawacada iyo eyga jinsiyada. Waxay u diyaargaroobayaan xayawaanka, laakiin, qabteen, ha cunin. Qaar badan oo ka mid ah jiirarka waxay qabtaan xayawaan, iyaga oo cunaya, inkastoo ay urta dabiiciga ah.
Yaa kale oo qodaya godadka beerta, sida loo kala saaro "moosta mole"
Malaha ma aha cayayaanka kaliya ee qashin kara cawska. Sidaa daraadeed, si wax ku ool ah wax uga qabashada dhibaatada, waxaa lagama maarmaan ah in si sax ah loo go'aamiyo sababta. Tan iyo inta badan ma aragno cayayaanka, laakiin kaliya ilaali natiijooyinka hawshooda, waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado in gofers iyo voles ay yeelan karaan calaamado isku mid ah oo ku yaalla deegaanka.
Qaabka qaabka dhulka loo qodayo wuxuu u adeegi karaa sida ugu weyn ee lagu aqoonsado cayayaan. Moles ka tago dusha dhulka ee foomka of a volcano ah, gophers - tuulooyinka qaab ah ee kabo, ciladaha faraha ha ka tegin godadka dhulka ee dusha sare.
Jiirarka Vole waa godad qiyaastii 5 cm ballaaran oo u dhow dusha dhulka iyo cawska cawska cun. Dhulka dhul-qodxan, raad yar oo yaryar ayaa la arki karaa.
Sida loola macaamilayo baraha dalka, siyaabaha barashada
Iyada oo ku saleysan sifooyinka xayawaankani, waxaa lagu doodi karaa in dagaalka lagula jiro ma fududa. Waa wax aad u bini'aadan si looga hortago inay ka muuqdaan goobta. Laakiin habkani waa waqti aad u badan.
Tani waxay ubaahantahay inaad xoqdo, qalab saqaf ah ama qalab kale. si loo dhiso xayndaab ku wareegsan wareegga goobta. Xayndaabka ayaa ka hortagi doona xayawaankani inay soo galaan goobaha, sidaas darteed dhulka hoostiisa waa inay ahaataa ilaa 20 cm oo dherer ah, oo lagu aaso dhulka si qoto dheer ah 50-60 cm.
Ma taqaanaa? Markii ugu horreysay ee la dagaallanka cayayaanka waxay ahayd 350 AD. Tani waxay ahayd xukunkii taliyaha Roomaanka ee Palladium. Waxay ku talisay isticmaalka bisadaha si ay ula dagaalamaan jiirarka iyo jiirka.
Ka fikir sida loola macaamilo jiirarka beerta.
Sidee looga cabsiin karaa buruqyada laga helo goobtaada
Bannaanka xayawaanku waxay badanaa raadinayaan hababka xakamaynta cayayaanka marka goobta ay horey u soo weerareen cayayaanka oo dalaggu uu soo gaaray. Markaas su'aasha macquul ah ayaa soo baxaysa: sida loo tirtiro jiirarka
Si arrintan loo sameeyo, waxaad dooran kartaa ugu bini'aadamnimada xayawaanka, laakiin hab aan fiicneyn. Waxaa la aaminsan yahay in ciyaalku ay cabsi galiyaan dhawaaqyo kala duwan oo qaylo leh iyo kokeylo fiiqan. Iyada oo adeegsashada cabsida ay isticmaalaan - iibsaday ama la sameeyeen gacmahooda, iyo sidoo kale inay ku sii darsadaan cuntada haraaga.
Shaki kuma jiro waxtarka hooseeya ee habkan, maaddaama wax walba ay ku xiran yihiin joogitaanka dabaysha iyo gariirka iyadoo la raacayo inta jeer ee la rabo. Doorka muhiimka ah ayaa la cayaaraa asaasaha suuxinta, sidaa daraadeed habkani kuma raaxaysto.
Waxaa kale oo la ogyahay in jiirarka aysan jeclaan sida digirta madow, roogga, digirta, toonta, basasha, basbaaska lagu beeray goobta. Xayawaankani waxay cabsiinayaan xayawaanka iyaga oo udoonaya.
Sidee looga saaraa jiirarka dacha si waxtar leh? Si tan loo sameeyo, isticmaal tiknoolojiyada casriga ah ee ku salaysan ultrasound.
Qalabka ultrasonic ee ku shaqeynaya isugeyn ah 300-400 Hz waxaa loo isticmaalaa sidii kaneecada. Tilmaamaha ayaa sheegaya in uu awood u leeyahay in uu ka saaro goobta cayayaanka fogaanta ilaa 20 m ee raadiyaha qalabkaas. Wixii waxtar leh, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo dhowr qalab oo kale ah.
Ma taqaanaa? Ciraaqkii ugu da 'weynaa ee laga soocaa jiirarka ayaa la jarjaray caws. Caleemo kasta waxaa la geliyaa marxaladda si ay 60-80 cm kor uga kacdo dhulka, iyo tunnel - oo ku saabsan mitir. Reed ee cimilada dabayshu waxay abuuraysaa saamaynta "dabaylaha dabaysha." Toddobaad ka dib, jiirarka ayaa baaba'ay.
Sidee waxtar u leh isticmaalka sunta ee baraha
Ka feker sida aad u soo qaadatid jiirarka aagga beerta adoo isticmaalaya hababka kiimikada ee xakamaynta. Zinc fosfeed waxaa loo isticmaalaa sunta.. Maadaama uu baruurtu yahay gabbaad, habkani ma aha mid wax ku ool ah. Inkasta oo bannaanka u badan isticmaalaan sunta jiirarka iyo ku faraxsan natiijada.
Xeeladaha kiimikada ee halista ah sidoo kale waa "bamka gaaska". Laakiin haddii nidaamka tunnel loo qodo aag ballaaran, ka dibna waxtarka habkani waa mid hooseeya.
Si aad u isticmaasho sunta cayayaanka si loola dagaallamo burooyinka waa wax aan fiicnayn. Marka hore, waxaad waxyeeleyn doontaa goobtaada, sababtoo ah waxaad burburin doontaa dhulka wabiyada, iyo marka labaad, tani waxay dhiirigelinaysaa baraha in ay qodaan tunnel cusub iyagoo raadinaya cunto.
Dabin digaag iyo dabin
Waxaa jira isbeddello dhowr ah oo lagu sameeyo dabaysha. Sidee loo burburiyaa godka beerta adoo adeegsanaya dabin?
Ku dabooli qaabka tuubada oo leh laba koofiyadood oo ku yaal geesaha. Faa'iidooyinka qalabkan waa waxqabadka liita ee daboolka. Daahfurka xayawaanku wuxuu yareeyaa waxtarka qalabkaan ugu yaraan. Mooska ayaa si fudud u go'aaminaya jiritaanka jir shisheeye ah oo ka gudbaya.
Waxaa jira dabin gaar ah oo loogu talagalay jiirarka. In kastoo ay ka qaalisan yihiin, waxay ku haboon yihiin dhexroorka daloolka, waxayna ku xiran tahay shuruudaha, waxay ku dhowyihiin xakameyntooda.
Nidaamka la yaqaan ee yar iyo kan yar ee halganka ah - dabin. Waxaa lagu rakibay tunnel godka iyo rusheeyeen dhulka leh waxoogaa yar. Kala hadal 100% waxtarkeeda waxtarkeeda muhiim maahan. Badanaa, jiiradu waxay gooyaan dabaabooyinka iyo dabagalka dhinacyada ama dariiqyada hoose. Faa'iido la'aanta habkan waa in laga yaabo inay ka shaqeyso daadinta dhulka ama aaney shaqeynin.
Waa inaad ogaataa in haddii dabintu aysan shaqeynin dhowr maalmood, markaa waa in loo wareejiyaa meel kale.
Sida jiirarka ma dagaalamo
Tixgeli sida aan u dagaallamin beerta leh bar, sababtoo ah hababkani waa kuwo aan waxtar lahayn oo ka baxsan bani'aadanimada.
Beerta qaar ka mid ah waxay isticmaashaa biyaha dagaalka ka dhanka ah jiirarka. Waxay qodayaan god dufan ah oo ku shub dhowr baaldiyo oo biyo ah ilaa godka tooska ah ilaa biyuhu ka soo baxaan tunnel kale, iyo baraha ma dabaashaa.
Laakiin habkani ma ah mid wax ku ool ah, sababtoo ah nidaamka guuritaanku waa mid aad u ballaaran oo heerar badan leh. Si aad hal daadi ah udid, waxaad u baahan tahay 100-150 litir oo biyo ah, qadar yar oo biyo ah ayaa soo jiidan doonta dhul-waynta, taas oo ah daweyn xayawaan ah, waxayna joogi doontaa halkan muddo dheer.
Waa in sidoo kale la xusuustaa in marka daloolku daadadanyahay, xayiraadda hawadu waxay ka dhici kartaa habka dhuumaha, taas oo yaraynaysa waxtarnimada dagaalka. Xawaaraha sare ee qotada tunnelku wuxuu ka caawin doonaa xayawaanka inay baxsadaan ilaa biyaha la nuugo.
Nidaamkan waxaa loo isticmaali karaa haddii aad xayawaan hayso oo aad ugaarsan karto, oo aadan ku sumoobin jilbadaha kiimiko sun ah. Wixii waxtar leh ee qaabkani waxaa lagama maarmaan ah in aad xiiseyso bisad ama ey.
Haddii aad fiiriso eeyga oo u wareejinaya dhulalka aagga kalluunka, ka dibna tani waxay noqon doontaa dhiirigelinta ugu wanaagsan ee ugaarsiga. Si kastaba ha ahaatee, xayawaanku hadda waa caajis, sababtoo ah waxay illoobeen sida cuntada loo cuno.
Isticmaalka hababka caanka ah ee halganka
Marka jiirarka laga helo beerta, fekerku waxa uu ka yimaadaa sidii looga takhalusi lahaa daaweynta dadweynaha. Tixgeli noocyada qalabkan iyo dhammaan faa'iidooyinka iyo khasaarihii ay isticmaalaan.
Badanaa dadku waxay isticmaalaan dabaysha dheriga. Nuxurkiisu wuxuu ku yaalaa go'aaminta tunnelka hadda ee baraha iyo isagoo ka hooseeya heerkulkiisa ama seddex litir oo biyo ah. Doolka ugu sareeya wuxuu xiraa guddida, kuna rusheeyaa dhulka. Waxaan sugeynaa illaa iyo inta laga gaadhayo godka, oo maraya tunnelka, waxay ku dhacdaa godka iyo saxarada. Si kastaba ha noqotee, way ka gudbi kartaa tunnelkan.
Haddii aad dhigto hilibka ama hadhaa sunta ah ee bar, ama xitaa dixirigga, waa in la xasuusnaado in biiyaha cuno cuno gooryaanka, sidaa daraadeed habkani ma noqon doono mid waxtar leh.
Mararka qaarkood bannaanka u fur furaha bariga. Waxay hoos u dhigaan nidaamka jumladaha oo dheji jidka dhexe. Kadibna waxay sugaan baraha inay muuqdaan. By kareyso carrada ayaa go'aamiya goobta ay. Iyadoo caawimaadda majarafad kale uu jeexay. Kadibna spade saddexaad si dhaqso ah u qodo biqin, ama ku foorarso fargeeto.
Habkani wuxuu leeyahay faa'ido badan. Ugu horreyntii, baruhu wuxuu u baahan yahay inuu sugo illaa saacad, marka labaadna, si dhakhso ah ayuu u qodayaa, sidaa daraadeed waxaad u baahan tahay inaad xoqdo xitaa si dhakhso ah si aan waxba udhimin. Seddexaad, qaabkani waa mid aad u bini'aadan.
Muuqaalka mole ee dalka - ma aha oo kaliya waxyeello, laakiin sidoo kale faa'iido
Tan iyo markii ay cayayaanka ku quudiyaan cayayaanka, dirxiga cayayaanka, waxay ku nool yihiin halka ay ugu tirada ugu badan tahay, si kale haddii loo dhigo, ciidda bacrin ah. In kasta oo uu dhaawac gaaray mindhiciradu waxay awoodaan inay faa'iido u yeeshaan.
Waxay burburiyaan dirxiga ee cayayaanka halista ah iyo jiirarka beerta. Intaa waxaa dheer, loosening ciidda, joodariyo caawinayaa si loo kordhiyo bacriminta, iyo sidoo kale ku kobciyo ciidda leh xeryahooda nitrogenous. Dhulka dhulgariirka waxaa lagula talinayaa geedo geedo ah. Xayawaanku wuxuu leeyahay maqaar qiimo leh, waana tan ugu weyn ee faa'iido leh.
Waa muhiim! Dalal badan oo yurub ah, xayawaankani wuxuu ku qoran yahay Buugga Cas, markaa ma dili kartid.
Dhibaatada ugu weyni waa in ciyaalku la noolaadaan qoysaskooda oo dhan, sidaas darteed, muddo gaaban waxay waxyeeleyn doonaan badi dhirtaada.
Ma jirto habka looga takhaluso bararka ma bixiso natiijo qeexan, sidaa daraadeed, geedi socodka laga saarayo barahaaga ayaa noqon kara mid dheer. Dooro hababka ugu wax ku oolka badan ee casriga ah ee lagula dagaallami karo cayayaankan.